कतार विश्वककै धनी देश, कुन देश कति धनी ? « Naya Page
कतार विश्वककै धनी देश, कुन देश कति धनी ?
प्रकाशित मिति : 12 January, 2019 11:28 am
काठमाडौं, २८ पुस । विश्वमा सबैभन्दा धनी देश कुन होला ? सामान्यता हामी अनुमान गर्छाैं चीन, अमेरिका या युरोपियन देशहरु हुन् । तर विश्व बैकले सार्वजनिक गरेको तथ्याक अनुसार एसियाका राष्ट्रहरु सबैभन्दा धनी देखिएका छ ।
विश्व बैकले सार्वजनिक गरेको तथ्याक अनुसार प्रति व्यक्ति ११८.२९७ हजार डलरसहित एसियाका कतार देश विश्वको धनी देश बनेका छन् । भने, मकाउ दोस्रो, सिंगापुर चौथो, ब्रुनाई पाँचौ, कुवेत छैटौँ र संयुक्त अरब सातौँ स्थानमा छ ।
सबैभन्दा धनी देशको मुल्याङ्कन गर्दा एउटा बाटो अपनाउने गरिन्छ । त्यो हो त्यस देशको जिडिपी कति छ ? जिडिपी भनेको त्यस देशको घरेलु उत्पादन हाे । जसमा कुनै देशले एक वर्षमा कति सामान वा सेवा उत्पादन गर्याे भन्ने हुन्छ ।
आकारका रुपमा हेर्दा विश्व बैंकले अमेरिका वा चीन धेरै अर्थव्यवस्था भएको देश मानिन्छ । तर, देशमा उत्पादन भएको सामान वा सेवा (जिडिपी)लाई सोही देशको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने हिसाबका आधारमा धनी देश मानिन्छ । विश्व बैंकले जारी गरेको जिडिपीका आधारमा सबैभन्दा धनी यी रहेका छन् । विश्वमा सबै धनी देश मात्रै हुँदैन ।
धेरै देश अति गरिब पनि रहेका छन् । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार विश्वमा सबैभन्दा गरिब देश दक्षिण अफ्रिका रहेको छ । यसपछि हैँटी र होण्डुरस रहेका छन् ।
विश्वको १० धनी देश सुची प्रतिव्यक्ति आय (हजार डलरमा)